RASMI: Macallin Massimiliano Allegri oo aan kooxda Chelsea maamuli doonin xilli ciyaareedka 2019-20 – Gool FM
RASMI: Macallin Massimiliano Allegri oo aan kooxda Chelsea maamuli doonin xilli ciyaareedka 2019-20
Haaruun June 13, 2019
(London) 13 Juunyo 2019. Macallin Massimiliano Allegri ayaa goordhow xaqiijiyey inuusan maamuli doonin kooxda Chelsea oo aad u doonaysa xilli ciyaareedka cusub ee 2019-20.
Kooxda kubadda cagta ee Juventus ayaa shaacisay bartamaha bishii la soo dhaafay in macallin Massimiliano Allegri uu naadiga ka tagi doono dhammaadka xilli ciyaareedkan kaddib markii uu kula guuleystay 11 koob muddo shan sanadood ah oo uu la joogay.
Wixii markaasi ka dambeeyey kooxda reer London ee Chelsea ayaa la wariyey inay xiriir la sameysay si macallin Allegri uu bedel ugu noqdo booska uu ka tagayo Massimiliano Allegri, kaasoo la hadal hayo inuu ku biiri doono kooxda Juventus.
Yeelkeede, macallin Massimiliano Allegri ayaa haatan xaqiijiyey in Chelsea iyo koox kaleba midna uusan maamuli doonin xilli ciyaareedka cusub ee 2019-20.
Max Allegri waxa uu carabka ku dhiftay inuu qaadan doono sanad kale oo uu ka nasanayo maamulka ciyaaraha, kaddib markii laga cayriyey shaqada kooxda reer Talyaani ee Juventus.
“16-kii sano ee ugu dambeeyey waxaan dareemay daal, mararka qaar waa inaad wakhti u heshaa inaad ka fogaatid waxyaabaha aad marwalba sameysid, isla markaana aad waqti la qaadataa qoyskaaga iyo saaxiibadaa.” ayuu yiri macallin Massimiliano Allegri oo doonaya inuu sanad kale ka nasto maamulka kubadda cagta.
Hazard iyo madaxweyne Florentino Perez oo si wada jir ah saxaafada kula hadlay garoonka Santiago Bernabeu
Muxuu ku jawaabay Luka Modric markii uu Eden Hazard weydiistay lambarka 10-aad ee kooxda Real Madrid?